ठोरी र माडीका जनप्रतिनिधि भन्छन्– अयोध्याबारे बोलेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/ठोरी र माडीका जनप्रतिनिधि भन्छन्– अयोध्याबारे बोलेकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद !
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्यकै आधारमा आएको भन्दै ठोरी र माडीका जनप्रतिनिधिहरूले भगवान रामको जन्म यहीँ भएको भन्ने तर्क गरे।भगवान् राम र सीतासँग जोडिएका धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वका ठाउँहरू ठोरी र माडीमा रहेको तर्क उनीहरूले अघि सारेका छन् । उनीहरू भन्छन्– ‘राम–सीतासँग जोडिएका यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण स्थलहरू छन् । त्यसैले यस ठाउँको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक अध्ययन हुनुपर्छ ।’
‘विसं. २०३४ सालअघि ठोरी चितवन जिल्लामै अवस्थित थियो । जुनबेला ठोरी र माडीलाई पर्यायवाचीकै रूपमा लिने गरिन्थ्यो । सरकारी कामकाज पनि माडीबाटै हुने गथ्र्यो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले ठोरीमा रहेको सीता गुफालगायत राम–सीतासँग जोडिएका थुपै्र धार्मिक स्थलहरू ठोरी–माडीकै आसपासको क्षेत्रमा छन् । सोमेश्वर पहाडको किनारामा सीता गुफा अवस्थित छ । सोही पहाडको पश्चिमतर्फ माडीमा अयोध्या अर्थात् अयोध्यापुरी समेत छ ।
वाल्मीकि आश्रम पनि माडीमा अवस्थित छ । यी सबै धार्मिक क्षेत्र सोमेश्वर पहाडकै आसपासका क्षेत्रमा छन् । त्यसैले यसैलाई प्रमाणमा रूपमा लिन सकिन्छ । जुन कुरालाई भोलिका दिनमा खोज अनुसन्धानले पुष्टि गर्छ । त्यसैले यसको इतिहासविद् र अनुसन्धानकर्ताले काम अघिबढाउनु पर्छ ।’
गुमनाम ‘सीता गुफा’ एकाएक चर्चामा अहिलेसम्म गुमनाम रहेको सो क्षेत्रको सीता गुफा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसँगै एकाएक चर्चामा आएको छ । सीताले वनबासको क्रममा तपस्या गरेको गुफाको रूपमा लिइँदै आएको ‘सीता गुफा’ अहिले गुमनाम छ ।
माडीले थाल्यो अयोध्याबारे छलफल प्रधानमन्त्रीले अयोध्या अर्थात् अयोध्यापुरी नेपालमै भएको अभिव्यक्ति दिएपछि चितवनको माडी नगरपालिकाले यसबारे छलफल नै सुरु गरिसकेको छ ।
ओलीले गरे मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको अन्तिम तयारी, पूर्वमाओवादीका बुहारीमन्त्री र गृहमन्त्री बाहेकको जागिर जाँदै